उत्कृष्ट खेलाडि vs उत्कृष्ट टोली – विश्वकप २०१४ फाइनल, जर्मनी-अर्जेन्टिना – tistung deurali
उत्कृष्ट खेलाडि vs उत्कृष्ट टोली – विश्वकप २०१४ फाइनल, जर्मनी-अर्जेन्टिना
Posted on July 13, 2014 February 7, 2015 by tistung
आज एउटा भयङ्कर खेल हुँदैछ । ३ पटकको विश्वकप विजेता जर्मनी र २ पटकको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना विश्वको सबैभन्दा ठुलो खेलकुद प्रतियोगिताको फाइनलमा भिड्दैछन् । दुबै टोलीका समर्थकहरु उत्साहित छन्, र अलिअलि बेचैन पनि । खेल न हो, यसैले जित्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । अलिकति अनिश्चितता रहिरहन्छ । खेल नसकिएसम्म ढुकढुक भइरहन्छ । यस खेलका बारे केहि जानकारी समेटेर यो ब्लगमा राख्ने कोशिष गर्दैछु ।
इतिहासको कुरा गर्दा दुबै देशसँग गर्व गर्न लायक थुप्रै फुटबल उपलब्धिहरु छन् । अर्जेन्टिना म्याराडोनाको कारण बढि प्रख्यात छ । म्याराडोना बाहेक di Stéfano, Kempes र Batistuta जस्ता खेलाडिहरु पनि अर्जेन्टिनाले उत्पादन गरेको छ, तर म्याराडोनाको स्थान सर्वकालिन महान खेलाडिहरुमा सुरक्षित भइसकेको छ । मैदानमा उनको जादुगरीको अहिलेसम्म पनि प्रशंसा हुन्छ । उनकै नेतृत्व र व्यक्तिगत कौशलको कारण १९८६ मा विश्वकप जितेको र १९९० मा फाइनलसम्म पुगेको अनुभव छ । १९८६ मा उनले गरेको एउटा गोल ‘शताब्दीको उत्कृष्ट गोल’ भनेर चिनिन्छ भने अर्को हातले गरेको गोल पनि उत्तिकै प्रख्यात (कुख्यात?) छ । १९९४ को विश्वकपमा उनले खेलेको हेर्ने अवसर मलाई पनि मिलेको थियो । उनकै निम्ति विश्वकप हेर्न धेरै मानिसहरुको एकाएक इच्छुक भएको सम्झना रोचक लाग्छ । आजकल Messi को तुलना पनि कहिलेकाहिँ त्यस्तै महान खेलाडिहरुसँग हुन्छ । उनले आफ्नो देशलाई विश्वकप जिताउन सकेभने मेरो विचारमा केहि वर्षमा उनलाई पनि सर्वकालिन महान खेलाडिहरुमध्ये गन्न थालिने छ । खेलाडिहरुको तुलना गर्दा क्लब बाट आर्जेका उपलब्धिहरु जति भएपनि र आफ्नो देशको टोलीबाट आर्जेको उपलब्धि, र विशेषगरी विश्वकप जितेको अनुभवले धेरै बढि महत्व राख्ने गरेको छ । अर्जेन्टिनाको चिर-प्रतिद्वन्दि ब्राजिल हो । छिमेकी यि देशहरु बिच दुश्मनी र प्रतिस्पर्धाको भावना प्रबल छ । ब्राजिलले ५ पटक विश्वपक जितिसकेको छ भने अर्जेन्टिनाले २ पटक मात्रै । हालका विश्वकपहरुमा पनि सम्भावना बोकेको टोली भनेर चिनिने गरेपनि अर्जेन्टिनाले खासै राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको छैन । जबकि दक्षिण अमेरिकी फुटबल प्रतियोगितामा ब्राजिल भन्दा अर्जेन्टिना बढि सफल छ, ८ पटकको तुलनामा उसले १५ पटक सो उपाधि हासिल गरेको छ । कहिलेकाहिँ ब्राजिलभन्दा राम्रो भएर पनि उत्तिकै सफलता पाउन नसकेको टोली भन्ने नराम्रो पहिचान अर्जेन्टिनाको बन्ने गरेको छ ।
जर्मनी विश्वकप इतिहासमै सबैभन्दा सफल देशहरुमध्ये एक हो । विश्वकप ३ पटक जितेको, ४ पटक उप-विजेता बनेको, युरो विजेता ३ पटक र उपविजेता ३ पटक साथै धेरै पटक सेमीफाइनल र क्वाटरफाइनल पुगेको लगायत धेरै उपलब्धीहरु उसँग छन् । १९९६ मा चेक गणराज्यसँग युरो प्रतियोगिता को फाइनलमा गोल्डेन गोल गरेर जितेको दृष्य ताजै लाग्छ । तर त्यतिबेला कहिलेकाहिँ जर्मन फुटबल शैलीको आलोचना पनि हुन्थ्यो । जर्मनी देशको पहिचान नै सबैकुरा अति निपुण, व्यवसायिक र व्यवस्थित तरिकाले गर्ने देशको रुपमा बनेको छ । यस अतिरिक्त थप ‘जित्नको लागि जे पनि गर्ने’ टोलीको पहिचान पनि बनेको थियो । यसको मतलब आक्रामक फुटबल बाहेक कहिलेकाहिँ भद्दा र अनाकर्षक खेल खेलेको आरोप उनीहरुलाई लागेको थियो । विशेषगरी १९९० को अर्जेन्टिनासँगको फाइनल हालसम्मकै विर्सनलायक फाइनल खेल भनेर चिनिन्छ । अर्जेन्टिना आकर्षक खेलशैलीको निम्ति चिनिएता पनि सो विश्वकपमा त्यस्तो देखिएको थिएन । दुइवटा पेनाल्टि सुटआउटहरुको साहाराले फाइनसम्म पुगेको अर्जेन्टिनाले भन्दा जर्मनीले (त्यतिबेलाको पश्चिम जर्मनी) बढि आक्रामक खेलिरहेको थियो । अर्जेन्टिनी खेलाडीहरुले रेफ्रीसँग भद्दा झगडा र अनावश्यक दबाब दिइरहको र जर्मन खेलाडीहरुले सानो foul हुँदा पनि भीरबाटै खसेको जस्तो playacting गरेका दृष्य सधैँ टेलिभिजन पर्दाहरुमा देखिइरहनेछन्, यस्तो नराम्रो विश्वकप फाइनल फेरी नहोस् भनेर । १९९६ पछि केहि समय जर्मन टोलीको प्रदर्शन पहिलेजस्तो हुन सकेन । १९९८ को विश्वकप र २००० को युरोमा लज्जाजनक प्रदर्शन हुँदा पनि जर्मन खेल आकर्षक थिएन । यतिबेला फुटबल हेर्न शुरु गरेका वा १९९० मा म्याराडोनाका समर्थकहरुसँग जर्मन टोलीको बारे राम्रो धारणा वा यादहरु छैनन् ।
जर्मन टोलीको निपुणताको बारे उनीहरुसँग विश्वकपमा पराजित भएपछि इङ्ग्ल्याण्डका खेलाडि Gary Lineker ले यसो पनि भनेका थिए “Football isasimple game. Twenty-two men chaseaball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.”
त्यतिबेला म्याराडोनाको कारण मंत्रमुग्ध भएका धेरै फुटबल प्रशंसकहरुको निम्ति जर्मन फुटबल टोलीसँग फाइनल जित्न पाउनु निकै मीठो बदला हुनेछ । १९८६ मा अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्दा पनि जर्मनीलाई नै हराएर जितेको थियो । पछिका विश्वकपहरुमा पनि संभावनायुक्त टोली भएर पनि क्वाटरफाइनल र समुह चरणबाटै निस्कनु परेको अर्जेन्टिनाको निम्ति पनि आफ्नो खसेको शाख फिर्ता पाउनु यो खेलको उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै ब्राजिलसँगै विश्वकै सबैभन्दा सफल फुटबल टोली भनेर चिनिने जर्मनीले विश्कप नजितेकै २४ वर्ष पुगिसकेको छ । करिब डेढ दशक अघि असफलताहरु हात लागेपछि शुरु भएको जर्मन फुटबलको व्यापक सुधारले राम्रा नतिजाहरु ल्याउन थालेपनि ठुलो प्रतियोगिता भने जिताइसकेको छैन । ‘जर्मन कार्यकुशलता’ को प्रमाण प्रस्तुत गर्न पनि उनीहरु यो खेल जित्न आतुर छन् । विगत १०-१२ वर्ष देखि उत्कृष्ट खेल खेलिरहेको जर्मन टोलीको पहिचान अहिले ‘जित्ने किसिमको’ खेल खेल्ने टोली होइन कि ‘आकर्षक’ फुटबल खेल्ने टोली बनेको छ । गत विश्वकपमा निकै जवान र अनुभवहीन टोली सहित पनि उनीहरुले अर्जेन्टिना र इङ्ग्ल्याण्ड दुबैलाई ४ गोल गरेर हराएका थिए । गोल गरिरहने र आक्रामक फुटबल खेल्ने उनीहरुको नयाँ शैलीले थुप्रै प्रशंसकहरु कमाएको भए पनि उपाधी भने दिएको छैन । कोच योखिम ल्योउले पनि केहि समय अघि आकर्षक खेल्न भन्दा जित्नमा यसपटक बढि ध्यान दिने बताएका थिए ।
प्राय दक्षिण अमेरीकी टोलीहरुको निम्ति सुरक्षित रहने गरेको ‘आकर्षक खेल’ को उपमा हालसालमा स्पेन र जर्मनीजस्ता युरोपेली देशहरुको पनि दावी लाग्ने गरेको छ । बरु ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको यसपटकको खेलमा आकर्षकता कम देखियो । ब्राजिल त नकआउट चरणमा सबै खेल मुश्किलले जित्दै सेमीफाइनलमा ६ गोल अन्तरले हार्न पुग्यो । नकआउट चरणमा २ पटक ९० मिनेट भन्दा धेरै खेलेर र निकै कम गोलहरु गरेर अर्जेन्टिना यहाँसम्म पुगेको छ । यद्दपी उनीहरुसँग मेस्सीजस्ता उत्कृष्ट खेलाडि र इगुआइन, म्यास्सेरानो र डि-मारीया जस्ता कुशल खेलाडइहरु पनि छन् । उता जर्मनीसँग कुनै एक स्टार खेलाडि नभए पनि सम्पूर्ण टोलीको खेल विगत एक दशक देखि नै निरन्तर राम्रो रहिआएको छ । यस प्रतियोगितामा पनि कुनै एक खेलाडिले धेरै राम्रो खेलेर वा गोल गरेर जर्मनी यहाँसम्म पुगेको हैन । जर्मनीको यो टोलीलाई हालसम्मकै सर्वकालिन उत्कृष्ट टोली भन्न थालिएको छ । यो खेल जितेमा सो स्थान उनीहरुको निम्ति सुरक्षित हुने संभावना धेरै छ । त्यस्तै मेस्सीको निम्ति सर्वकालिन उत्कृष्ट खेलाडिको स्थान सुरक्षित बनाउन सोहि कुरा लागु हुन्छ । मेस्सी र जर्मन टोलीका खेलाडिहरु दुबैसँग थुप्रै क्लव उपाधिहरु जितेको अनुभव छ, र आफ्नो देशको निम्ति विश्वकप जिताउने एउटा उद्देश्य बाकिँ नै छ, जुन जित राम्रो र महान बिचको फरक हुने कारण बनिदिन सक्छ । उत्कृष्ट खेलाडि र उत्कृष्ट टोली बिचको यो खेल रोचक होस्, दर्शकहरुको मन जितोस् र अन्त्यमा राम्रो खेल विजयी बनोस् भन्ने शुभकामना !
Posted in UncategorizedTagged argentina best player best team football germany germany vs argentina messi world cup world cup final
← फुटबलको भु-राजनीति
This is how Modi can help Nepal help India →